Google Fit adịlarị nyocha ụra na eze | Gam akporosis
Google Fit ejirila ihe ọhụrụ na-emelite izu ndị a. Ọchịchịrị mode e webatara n'oge na-adịbeghị anya na nzuzo na ngwa egwuregwu ahụ. Mbido mbụ izizi na ọnwa, mgbe enwere obi abụọ banyere ọdịnihu ya. O yiri ka ụlọ ọrụ ahụ ọ na-akụ nzọ na ngwa ahụ, ebe ọ bụ na anyị nwere mmelite ọzọ na ọrụ ọhụrụ.
Na nke a ọ bụ ọrụ ọtụtụ ndị ọrụ na-eche. Google Fit mechara webata in-app ụra nlekota na ọkwa. E gosipụtara esere ụra na ngwa ahụ, nke ị nwere ike ijikwa oge ụra onye ọrụ.
Agbanyeghị na nke a abụghị ihe ngwa ahụ ga-eme nwa afọ, mana anyị chọrọ ngwa ndị ọzọ maka ya. Yabụ, ọ bụrụ na anyị jiri ngwa iji tụọ ụra, dịka ụra dị ka gam akporo, ọ ga-ekwe omume mbupụ data a na Google Fit ma n'ụzọ dị otú a nwee njikwa ụra nke onye ọrụ n'oge niile.
Na mgbakwunye, ndị ọrụ nke ngwa ahụ ga-enwe enwere ike iji aka tinye data Ọzọkwa ma ọ bụrụ na ị chọrọ. N'ihi ya, ọ naghị ewetara nsogbu ọ bụla na nke a. Ọ bụ ọrụ ọtụtụ chere na ngwa adịghị, ma emechaa mee ya ọfụma.
Ọ bụrụ na ị jiri ngwa nke atọ iji tụọ ụra, ị ga - eme ka ha mekọrịta ya na Google Fit inwe ike mbupụ data a n'oge ọ bụla. Agaghị achọ ihe ọzọ na nke a. Nke a ga-ekwe omume site na ngwa Google kachasị ọhụrụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ọrụ a adịlarị, naanị ị ga-abanye na Playlọ Ahịa Play ma melite Google Fit. E meelarịrị ụdị ọhụụ nke ngwa ahụ maka ndị ọrụ niile na gam akporo, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu na nke a iji nwee ike iji ya na ekwentị gị ma ọ bụ lelee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Fit ugbu a na-ewebata nleba anya ụra